10 / 11 / 2021 10 / 11 / 2021 ခရစ် Wharfe 608 Views စာ 1 မှတ်ချက် 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10267 Gingerbread အိမ်, 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, 10275 Elf ကလပ်အိမ်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, Creator Expert, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego VIP တနင်္ဂနွေ, LEGO VIP Weekend ၂၀၂၁, Lego ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, LEGO.com, မော်ဂျူးလ်အဆောက်အ ဦး, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, အဆိုပါ LEGO Group, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှု
Lego Creator Expert 10255 ညီလာခံရင်ပြင်၎င်း၏ဆက်ခံသူအများအပြား ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက် စင်ပေါ်၌ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အနားယူမည့်ရက်ကို နောက်တစ်ကြိမ် တွန်းပို့လိုက်ပါသည်။
2017 ခုနှစ်တွင် မူလက စတင်ခဲ့ပြီး 10 နှစ်မြောက် မော်ဂျူလာ အဆောက်အအုံသည် ယခု ခေါင်းစဉ်ခွဲ၏ 15 နှစ်မြောက် 2022 ခုနှစ်ထက် ကျော်လွန်၍ ရောင်းချနေဆဲဖြစ်သည်။ လာမည့်နှစ်အကုန်တွင် အနားယူရန် စီစဉ်ထားပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏ ဌာနခွဲ၊arture သည် ယခုနောက်ဆုံး 31 ဒီဇင်ဘာ 2023 ရက်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။
အခြားဦးတည်ရာသို့ ရွေ့လျားခြင်း ဖြစ်၏။ 10270 စာအုပ်ဆိုင်လက်ရှိအသက်အကြီးဆုံး Lego UK နှင့် US တွင်ရရှိနိုင်သော modular အဆောက်အဦ (10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် ခေတ္တခဏသာ ပစ္စည်းပြတ်ပါသည်။ LEGO.com သြစတြေးလျ)။ 2020 တွင် ပထမဆုံးထွက်ရှိခဲ့သော 16×32 အဆောက်အအုံအတွဲသည် 2023 နှစ်ကုန်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း လာမည့်နှစ်ကုန်တွင် အနားယူမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါတွေက ဒီလရဲ့ အပ်ဒိတ်ကနေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့စာရင်းအထိ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေပါ။ Creator Expert (ယခု လူကြီးများအတွက် Lego) သည် 2021 နှင့် XNUMX တွင်အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းသော အခြားပြောင်းလဲမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နှင့် 10275 Elf ကလပ်အိမ် 2023 မှ 2022 ထိ ရှေ့ကို တိုးသွားသည် ၊ သည် set များအတွက် အံ့သြစရာ မလိုလောက်ပါ။
နောက်ထပ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းက စင်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaတတိယတစ်ခုက၊ လမ်းပေါ်မှာသတင်းများအရ 2022 အစောပိုင်းတွင်၊ ကြီးမားပြီး ဘဲဥပုံအလွတ်များအတွက် စင်ကျယ်ဝန်းရန် နေရာများစွာရှိသည်။ ဆောင်းရာသီကျေးရွာ စုဆောင်းမှုအပြင် နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုလည်း လာမည့်နှစ်တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ 10267 Gingerbread အိမ် 2021 မှာ ထွက်မယ့်လမ်း၊ 10275 Elf ကလပ်အိမ် သွားဖို့လိုင်းက နောက်တစ်ခုရှိတယ်။
ဤသည်မှာ တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် အငြိမ်းစားယူမည့်ရက်စွဲများ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါသည်။ Lego Creator Expert / လူကြီးများအတွက် Lego လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်သော set ကို LEGO.com. 2021 ခုနှစ်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားသော အများအပြားကို နေရာအနှံ့ လျှော့စျေးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
10272 ဟောငျး Trafford - မန်ချက်စတာယူနိက်တက်
10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery
၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft
ဤရက်စွဲများသည် ပြောင်းလဲရန် တာဝန်ရှိနေသေးသည်ကို သတိရပါ (ဤလလေးခု၏ အလှည့်အပြောင်းတွင် သရုပ်ပြထားသည့်အတိုင်း)။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား မျှော်မှန်း၍မရနိုင်သော အနာဂတ်အတွက် သင့်ဝယ်ယူမှုများကို အစီအစဉ်ဆွဲရန် ကူညီသင့်သည် — စartအထူးသဖြင့် နိုဝင်ဘာလရဲ့ ကြီးမားတဲ့ စျေးဝယ်ပွဲတွေကို စိတ်ထဲမှတ်ထားတယ်။ စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် Lego 2021 နှစ်ကုန်တွင် အငြိမ်းစားယူမည်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
← LEGO သည် Animal Crossing နှင့် ပူးပေါင်းသော်လည်း သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပေ။
Lego Marvel 76156 Rise of the Domo သုံးသပ်ချက် →
တစ်ခုမှာ "Lego တိုင်း Creator Expert 2021 နှင့် ကျော်လွန်၍ အနားယူရန် သတ်မှတ်ထားသည် - နိုဝင်ဘာလ အပ်ဒိတ်"
Lynda L Waterman
12/11/2021 at 15:17
အစိမ်းရောင် ကုန်စုံဆိုင်ကို ပြန်ယူလာပါ။ တစ်ခုဆောက်ချင်ပါတယ်။ Legos ဖန်တီးရှင်အစုံကို တည်ဆောက်ရတာ နှစ်သက်တုန်းပါပဲ။ ရဲစခန်း ဘဏ်ကို စိတ်မဝင်စားဘူးလား (အချိန်ပိုင်း ညံ့ဖျင်းတဲ့ USA?